တရားတော်: မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးကြောင့် ”မြတ်စွာဘုရား ညွှန်ပြသောလမ်း” ကို အမှန်သိမြင်ခြင်း
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးကြောင့် ”မြတ်စွာဘုရား ညွှန်ပြသောလမ်း” ကို အမှန်သိမြင်ခြင်း
ဂျာမနီရောက်ခါစ တစ်ယောက်တည်း ရှင်သန်ဖို့ စတင်ကြိုးစားနေချိန်တွင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တရားတော်များကို နာကြားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မဆီမှာလည်း စီဒီတစ်ချပ်သာ ရှိပါသည်။ ၀ယ်တုန်းကတော့ တရားသဘောဆိုတာလည်း မသိ၊ ဘာကိုရွေးရမှန်းမသိဖြစ်၍ စီဒီ တစ်ချပ်သာ ၀ယ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ”ငါလဲ သိပ်နားထောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး. စီဒီတစ်ချပ်ဆို တရားတွေအများကြီးပါတာ. ကုန်အောင်ပဲ နားထောင်ပါလေ့ ” ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ တစ်ခွေတည်း ၀ယ်ခဲ့ပါသည်။ ခုမှ ကိုယ်ပိုင်ခွေ နောက်ထပ် ထပ်လိုချင်နေပါသည်။ ”မင်းသီလ” က download လုပ်လို့တော့ ရပါသည်။ ဒါပေမဲ့ လူ့စိတ် အစွဲအလန်းဆိုတာ ခက်သား။ ခု လက်ရှိ တစ်ခုတည်းသော တရားခွေလေးလို ”မန္တလေး မင်္ဂလာရိပ်သာ” ကျောင်းတိုက်က တရားခွေကိုမှ လိုချင်နေပြန်ပါသည်။ အဲဒီကျောင်းတိုက်မှာ တကယ့်လမ်းမှန်အစစ်ကို စတွေ့ခဲ့တာဆိုတော့ အစွဲအလန်းတော့ ရှိနေတာပေါ့လေ။ တရားတော်များကို နာကြားရာတွင် စီဒီထဲကအစီအစဉ်အတိုင်း(သို့မဟုတ်) ခေါင်းစဉ်လေးကြည့်ပြီးသာ နာကြားခဲ့ရပါသည်။ အသစ်တရားခွေမို့ ဘယ်ခေါင်းစဉ်က ဘာအကြောင်းဟောတယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ပါ။ ထူးခြားသည်မှာ ဖွင့်မိသော တရားတော်တို့သည် ကျွန်မတွေ့ကြုံနေဆဲ ပြဿနာ၏ အဖြေများ ဖြစ် ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ဥပမာ ကျွန်မသည် နေမကောင်း၍ ကျောင်းမသွားနိုင်ဖြစ်သောနေ့ … ကျွန်မက အလွန်ချုချာပါသည်။ ခဏခဏ ကျောင်းပျက်ရသောအခါ အလွန်စိတ်ပျက်မိပါသည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ ”ငါ သူတစ်ပါး အပေါ် စိတ်ယုတ်မာ မထားခဲ့ဘူးပဲနဲ့ ဘာကြောင့်များ အနှောင့်အယှက်တွေ ဖြစ် ဖြစ်နေရပါလိမ့်” ရယ်လို့ စိတ်ဓါတ်ကျနေခဲ့ပါတယ်။ ပြည်ပတွင် ကျောင်းတက်နေရသူတိုင်း ဒီခံစားချက်ကို နားလည်ပါလိမ့်မည်။ သူများတွေ အလုပ်လုပ် နေကြတာလဲ မြင်နေရသည်။ ကိုယ့်မှာကလည်း အလုပ်က တပုံတပင်။ နေက မကောင်းတော့ အလုပ်မလုပ်နိုင်။ မလုပ်နိုင်တော့ စိတ်ဓါတ်ကျ။ စိတ်ဓါတ်ကျတော့ ကျန်းမာရေးက ပိုဆိုး။ အဲလိုတွေ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အဲဒါနဲ့ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း နေ နေရင်း ဖွင့်လိုက်မိသောတရားက “သိကြားမင်း သောတာပန်တည်ပုံ” ဖြစ်နေပါသည်။ အဓိကဆိုလိုရင်းမှာ……သိကြားမင်းက မြတ်စွာဘုရားကို ”လူတွေဟာ ကျန်းမာရေးလဲ လိုက်စား။ သူများကိုလည်း ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ မေတ္တာလဲပို့ကြပါတယ်။ ဒီလိုနေပါရက်နဲ့ ဘာကြောင့်များ အန္တရာယ်မကင်း ဘေးမရှင်း ကျန်းမာရေးမကောင်း ဖြစ်ကြပါသလဲ” ဟု မေးလျှောက်ပ်ါသည်။ မြတ်စွာဘုရားက”ထိုလူတွေ၏ စိတ်မှာ ဣဿာ မစ္ဆရိယ ရှိနေလို့ပါ” ဖြေကြားပါသည်။ အဲဒါ တရားတစ်ခုလုံး၏ အနှစ်ချုပ် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့် ဥပမာမျိုးစုံနဲ့ ဟောပြပါသည်။ ဣဿာ မစ္ဆရိယ ရဲ့ ပုံစံကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ နားလည်အောင် ရှင်းပြပါသည်။ အရင်က ကျွန်မသိသည်က ”ဣဿာ မစ္ဆရိယ ဆိုတာ သူများကို မနာလို ၊ ၀န်တိုခြင်းတွေဖြစ်။ ကိုယ့်ထက်သာနေတဲ့သူကို ပျက်ဆီးအောင် လုပ်ခြင်း၊ မလုပ်ရဲတောင် ပျက်ဆီးပါစေဆိုတဲ့ ဆန္ဒရှိနေခြင်း၊ ကိုယ့်ဝဋ္ဋ်လိုက်မှာကြောက်လို့ အဲဒီ ဆန္ဒ ပေါ်လာရင်တောင် အတင်းဖျောက်သော်လည်း အဲဒီလူ တစ်ခုခုများ အဆင်မပြေဘူး ကြားလိုက်ရင် ရုတ်တရက် ၀မ်းသာသွားခြင်း။” အဲလိုတွေလို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။ ဆရာတော် ဟောကြားနေတာကို နားထောင်နေရင်းနဲ့မှ ငါ့အဖြစ်နဲ့တူလှချည်လားလို့ တွေးရင်း စဉ်းစားလိုက်တော့ ”အမယ်လေး ဟုတ်ပေသားပဲ….ကျွန်မ ဖြစ်နေတာက သူများတွေ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ကိုယ်က မလုပ်နိုင်လို့ အားငယ်နေတာလေ”။ သူများတွေကို မနာလို မဖြစ်ဘူးလေ။ သူတို့လဲ နေမကောင်းပါစေနဲ့ရယ်လို့လဲ စိတ်ကူးမရှိဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက သူတို့ကျ လုပ်နိုင်ပြီး ငါမလုပ်နိုင်လေခြင်းဆိုပြီး အားငယ်နေတာလေ။ နှိုင်းယှဉ်နေတာလေ။ ကိုယ်တိုင်မကြုံဖူးတဲ့လူတွေကတော့ ဒါလေးက (ခဏလေးနေမကောင်းနေတာလေးက) ဒီလောက်စိတ်ဓါတ်ကျစရာ မရှိဘူးလို့ထင်ချင်ထင်ကြပါမည်။ ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးတဲ့သူကတော့ ခံစားရမှု အတိုင်းအတာကို ပိုသိပါလိမ့်မည်။ အဲဒီကျမှ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ လုံးဝကို မမြင်ရအောင် ပုန်းနေတဲ့ ဣဿာ (အလိုမကျမှု) ကြီးကို ဘွားကနဲ တွေ့လိုက်ပါတော့တယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ တရားတော်ကို နားထောင်နေရင်းနဲ့ကို ဆရာတော်ဟာ ကိုယ့်စိတ်ကိုသိနေလို့ ကိုယ့်ရှေ့လာပြီး ဆုံးမနေသလို။ နင့်စိတ်က ဒီ ဣဿာကြီးရှိနေလို့ နေမကောင်း စိတ်ဓါတ်ကျ ဖြစ်နေတာဟဲ့လို့ တည့်တည့်ကြီးကို လာပြောနေသလို ခံစားရပါသည်။ အဲလိုသိလိုက်တာနဲ့ ချက်ချင်း ဣဿာကိုဖျောက်ပစ်လိုက်တာဟာ ချက်ချင်းကို စိတ်ဓါတ်ကျတာ ပျောက်သွားပါတော့တယ်။ ခန္ဓာကြီးကသာ အနာမို့ နေမကောင်းတာကျန်နေတာ။ စိတ်ဓါတ်ကျတာကတော့ ချက်ချင်းကို ပျောက်သွားပါတော့သည်။ အဲလိုပဲ မသိပဲ ဖွင့်လိုက်၊ ကိုယ့်ပြဿနာရဲ့ အနာပျောက်ဆေးကြီးဖြစ်လိုက် ကြုံတွေ့နေရတာ များလွန်းလှပါသည်။ သာမန် ဘာစိတ်ဒုက္ခမှမရှိဘဲနဲ့ တရားနာရင်တော့ သာမန်သိရုံပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ဒုက္ခရဲ့ ထွက်ပေါက်လဲဖြစ်ရော ”ဟုတ်လိုက်တာ” လို့ကို ၀န်ခံပြီး ယုံကြည် လက်ခံသွားပါတော့သည်။ အဲလို အဖြေတွေတွေ့ တွေ့နေတော့ ပိုနှစ်သက် အာရုံစိုက်လာပါသည်။ ထပ်ခါထပ်ခါ တရားနာရင်းနဲ့ ၀ိပဿနာကို စိတ်ဝင်စားလာပါသည်။ ခုချိန်မှာတော့ ထို တရားခွေလေးကို နားထောင်နေခြင်းဟာ ခန္ဓာဝန်ကြီးက ဘယ်လိုကျွတ်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့ကို နားထောင်ခြင်း ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်မမှာ နည်းလမ်းကို ပြည့်စုံအောင် မသိပါ။ သိဖို့ ရှာဖွေဖို့ ”စိတ်ဝင်စား” နေတဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိပါသည်။ ရှေ့ဆက်၍ ရေးမှာတွေကလည်း ထိုတရားခွေတစ်ခုတည်းကိုသာ နာကြားရင်းမှ ”သိလာသမျှကို ပြန်ပြော”သလို ရေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by မဟာဆန် at 8:56 AM
သာဓု အကြိမ်ကြိမ်ခေါ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တရားတော်အဆုံးအမများကိုနာယူပြီး ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီး အနှစ်မရှိပုံ၊ ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၏ ချုပ်ငြိမ်းရာ နိရောဓသစ္စာ အသင်္ခတနိဗ္ဗာန် ရောက်ရာ အကျင့်မြတ်တို့ကိုကြိုးစားအားထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ "ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားများ များများနာယူနိုင်ပြီး လက်တွေ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ကာအပါယ်တံခါးလုံးဝပိတ်သော အရိယာသစ္စာကို ဒီဘ၀မှာဘဲရနိုင်ပါစေ"
(၉) န၀င်း အဓိဌာန် ပုတီး စိတ်နည်း